Egipta : Ny tetikasa “Mitrandraka ny fady” manodidina ny fanimbinana ny taovam-pananahan’ny vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Egipta : Ny tetikasa “Mitrandraka ny fady” manodidina ny fanimbinana ny taovam-pananahan'ny vehivavy
Voadika ny 07 Jona 2019 3:04 GMT
[Rohy amin'ny teny anglis sy arabo]
Tsy tapaka mikarakara atrikasa fanofanana momba ny fanabeazana ara-pananahana ao Egipta ilay bilaogera Ahmad Awadalla, no sady mampiasa ihany koa ny bilaoginy mba hizaràna ny zavatra niainany tamin'io sehatra io. Amin'ny maha-mpikambana azy ao anatin'ny tetikasa “Exploring Taboos”, Ahmad Awadalla dia tsy tapaka mamoaka ireny zavatra niainany ireny ao anatin'ny bilaoginy A Rebel with a Cause, toerana amoahany lahatsoratra maro momba ireo fifanakalozandresaka nifanaovany tamin'ny ankizy manodidina ny Fanimbinana ny Taovam-Pananahan'ny Vehivavy – Mutilations Génitales Féminines (MGF). Tanisainy ny fandalinana iray vao haingana natao momba io resaka io tao Egipta, izay « mandinika ity fomba mamohehatra ity, sy manangona ireo fomba fijery samihafa mikasika azy io, na avy amin'ny lehilahy na avy amin'ny vehivavy izany ».
Amin'ny fikarakarana seminera fanofanana tahaka izany momba ny fanabeazana ara-pananahana, mila mitandrina be izy manoloana ireo mpandray anjara, satria « nantsoina hifanakalo hevitra ireo tanora ireo, imasom-bahoaka, momba ireo olana mifamatotra amin'ny resaka fananahana, ary sambany teo amin'ny fiainan'izy ireo (mazava loatra, anatin'ny resaka fahasalamana!).
Iray tamin'ireo teknika nampiasain'i Ahmad Awadalla ny karazana lalao iray fifampizaràna torohay, ka mandritra izany dia misy fehezanteny (fanamafisana) efa nomanina mialoha sy notsinjaraina ho lafy 2. Samy mahazo ampahany amin'ilay fehezanteny daholo ireo mpianatra tsirairay ary tsy maintsy ataony izay hahitàna ny ampahany banga mba hamenoana azy sy hampisy dikany ilay fehezanteny. Hoy ny nosoratan'i Ahmad Awadalla :
Milaza toy izao ny fehezanteny iray : « ny Fanimbinana ny Taovam-Pananahan'ny Vehivavy (MGF) dia mety hiteraka fandehanan'ny rà tsy mijanona, fahamombàna ary tsy fisian'ny libido intsony (berood ginsi) ». Rehefa samy mahita ny tohin'ny fehezanteniny ny tsirairay, angatahako hamaky tsirairay azy ireny amin'ny feo mafy. Namaky tamin'ny feo avo ny iray tamin'ireo ankizivavy ary, taorian'izay indrindra, nanifikifika ny lohany sady niteny hoe: « tsy resy lahatra aho, fomba ahoana no hampety an'izany ? ».
Nanazava taminy aho fa ny fepetra (nampiharana ny MGF hatrizay) sy ireo fomba nampiasaina nandritra ireny fandidiana ireny dia mety hahafaty. Nohazavaiko taminy ihany koa ny anjara toeran'ny clitoris eo amin'ny vatan'ny olona, sy ny mahatonga ny fanapahana azy io hiteraka tsy fisian'ny faniriana firaisana ara-nofo intsony eo amin'ny vehivavy.
« Fa tsy zavatra tsara ve ho an'ny vehivavy (ny tsy fisian'ny faniriana firaisana ara-nofo)? », hoy ilay ankizivavy nihoraka. Gaga aho na dia tokony ho efa nanampo an'izay aza, tsoriko fa tena zava-tsy ampoizoko foana io, indrindra fa rehefa vehivavy no manao izay karazana fanehoankevitra izay. Mino aho fa noho izy tsy mbola tonga amin'ny taona maha-maoty ka tsy mbola taitra ny filàny ara-nofo no antony, ary etsy ankilany dia tsara izany, satria rehefa nahazo fanentanana izy, tsy hamela ny taranany hiharan'io fanao mamohehatra io any aoriana!
Lahatsoratra roa ao amin'ny bilaogy no natokan'i Ahmad Awadalla ho an'ny resaka MGF, izay ahitana antontanisa avy aminà fikarohana iray momba ny habetsahan'ny mponina sy ny fahasalamana, notontosaina tao Egipta tamin'ny 2008. Abaribariny ao fa 91% ny tahan'io fomba fanao io any anivon'ny vehivavy eo anelanelan'ny 15 sy 49 taona. Hitany mora foana ny sasantsasany tamin'ieo antony manamarina ny « mampalaza » ity fomba fanao ity, sy sy sasantsasany amin'ireo hevitra raikitampisaka, araka izay namborahan'ireo mpandray anjara tamin'ity atrikasa fiofanana ity azy.
Eritreretin'ny olona sasany fa , raha tsy tapahana ny clitoris, dia hitombo ka ho lasa lehibe toy ny bibity no iafaràny. Ny hafa indray manao azy fotsiny ho fanajàna ilay fombandrazan-dry zareo. Saingy, ny matetika indrindra, lazain-dry zareo fa ho fifehezana ny faniriana firaisana eo amin'ireo ankizy vavy no antony anaovan-dry zareo azy io, sy hiantohana ny tsy fanitsakitsahana tokantrano eo amin'ireo vehivavy efa manambady; fa koa mba hampitomboana ny vintana ho an'ny ankizy vavy tsirairay hahazo vady sy ho eken'ny vadiny !
Ampiany ihany koa an'ity ny momba ireo hevitra raikitampisaka mbola mihatra ao anatin'ny fiarahamonina :
Mazava fa raisin'ny fiarahamonina eto ho toy ny zavatra iray avy amin'ny devoly ny faniriana firaisana ara-nofo ananan'ny vehivavy ka tsy maintsy fehezina rehefa tsy vita ny hamongotra azy tsotra izao. Ny olona sasany aza tonga mihitsy amin'ny fampitahana ny ankizy vavy iray tsy nofiraina aminà ombilahy iray te-hiray, tsy afa-po aminà lehilahy tokana ! Heverin'ireo lehilahy fa raha manambady vehivavy iray tsy voafira, tsy ho vitan'izy ireo ny hanao izay hahafa-po azy amin'ny filàny ara-nofo.
Farany, miaiky izy fa ireo hetsika fanentanana [teny arabo] dia nokarakaraina hanoherana ity fomba fanao ity, efa voararan'ny lalàna tamin'ny fomba ofisialy hatramin'ny 2008. Na izany aza, mbola mitohy ihany ny fampiharana ny fanimbinana taovam-pananahan'ny vehivavy ary matetika dia vehivavy ihany no mpanao azy. Ny fanadihadiana notanisaina etsy ambony dia manipika koa fa ny vehivavy sasany, ireo efa be taona amin'ny ankapobeny, no tena isan'ny olona mamporisika ny fanaovana azy io. Mamintina i Ahmad Awadalla hoe:
Na izany aza, voafetra ireny hetsika fanentanana ireny ary mila taona maro mba hanombohany hiteraka vokatsoa. Tsy ampy ireo lalàna, indrindra noho ny tsy fisian'ny tetikady fampiharana azy ireny eto. Raha ny lalàna fotsiny tsy hahavita hanova ny finoana sy ny fahazaran'ny olona. Noho izany, tsy resaka fotsiny hoe atao izay hahatsiarovana tena fa koa ovaina ireo fomba fanaon'ny razambe fahagola.
Ito ny sary iray fanentanan'ny Amnesty International ho fanoherana ny MGF.
Nandray anjara tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity i Noha Atef